किन छुटेको थियो सुशान्त र अंकिता लोखन्देको सम्बन्ध ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com किन छुटेको थियो सुशान्त र अंकिता लोखन्देको सम्बन्ध ? - खबर प्रवाह
आइतवार, कार्तिक १६, २०७७
किन छुटेको थियो सुशान्त र अंकिता लोखन्देको सम्बन्ध ?
मुम्बई – केही समयअघि भारतीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले आत्महत्या गरे । उनको आत्महत्याले बलिउड स्तब्ध बनेको छ । साथै बलिउडमा नातावाद हाबी भएको भन्दै बहस पनि शुरु भएको छ ।
यतिबेला सुशान्त सिंहको जीवनमा आएकी अंकितासँगको सम्बन्धको पनि बलिउडमा चर्चा हुन थालेको छ । यी दुईको भेट टिभी धारावाहिक पवित्र रिस्ताको छायांकनका दौरान भएको थियो । दुवै छिट्टै नजिक भए सुशान्तको कुराकानी अंकितालाई मन पर्न थाल्यो । सुशान्त पनि अकिंतातर्फ आकर्षित भए ।
मित्रता प्रेममा बदलिन धेरै समय लागेन । दुवैले एकअर्कालाई मन पराउन थाले । टिभी शो पनि सुपरहिट भयो ।यी दुईले आफ्नो सम्बन्धको बारेमा धेरै खुलासा गरेनन् । न त लुकाए नै । साथै घुम्ने, छुट्टी मनाउने र रमाइलो गर्ने गरेका तस्वीर पनि शेयर गरे ।फ्यानबीच चर्चा चल्न थाल्यो कि, यी दुई कहिल्यै छुट्ने छैनन् । यी दुई ६ वर्ष सँगै रहे ।अचानक सन् २०१६ मा यी दुईको सम्बन्धमा खटपटी आउन थाल्यो । पछि यी दुई अलग भए । फ्यानलाई अझै पनि लागिरहेको थियो, प्रेममा खटपट हुन्छ । फेरि नजिक हुनेछन् । तर, त्यस्तो भएन ।
सुशान्तले आफ्नो करिअरलाई महत्त्व दिन चाहन्थे । उनी मान्थे कि, बिहे ग¥यो भने काममा ध्यान जाने छैन । सहमतिमा नै यी दुई छुट्टिए ।अंकितासँग अलग भएपछि सुशान्तको नाम कृति सेनन, सारा अली खान र रिया चक्रवर्तीसँग पनि जोडियो । यी सम्बन्धले पहिलेको जस्तो चर्चा कमाएनन् ।
सुशान्तका साथीले उनले चोखो माया अंकितासँग गरेको दाबी गर्छन् । यदि अंकिता भएको भए सुशान्तलाई सम्हाल्ने साथीहरु दाबी गर्छन् ।अकिंताको घरमा अझै पनि नेमप्लेट छ, जुन उनले सुशान्तसँग बनाएकी थिए । दुवैको नाम उक्त नेमप्लेटमा लेखिएको छ । अंकितालाई सधै लागेको थियो कि, एकदिन सुशान्त फेरि आफ्नो जिन्दगीमा आउनेछन् ।
गुट बनाएर बहुमतको खेति गरेकै कारण पार्टी विग्रिएको नेकपा अध्यक्ष ओलीको दावी
सहमति र समझदारी कार्यान्वयन हुन नसके पार्टी विघटन हुन सक्छ : प्रचण्ड
‘जुन वर्गका लागि राजनीति गर्‍यौं, पार्टीमा त्यो वर्ग नै छैन’ : नेता भुसाल
ओली–प्रचण्डसँग विष्णु पौडेल रुष्ट, सचिवालय बैठकमा नजाने
२०७७ साल असोज ३० गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल
२०७७ साल असोज २९ गते बिहीबारको दैनिक राशिफल
२०७७ साल असोज २२ गते बिहीबारको दैनिक राशिफल
२०७७ साल असोज २७ गते मंगलबारको दैनिक राशिफल
सुशान्त सिंह राजपूतमाथि फिल्म बन्दै, शीर्ष भूमिकामा टिकटक स्टार
मुम्बई – बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधनपछि भइरहेको बहसका बीच उनको जीवनमा आधारित फिल्म बन्ने भएको छ ।‘सुसाइड या मर्डर’ नामक फिल्मको शीर्ष भूमिकामा सुशान्त झैं देखिने टिकटक स्टार सचिन तिवारीले अभिनय गर्ने भएका छन् । यो फिल्म केही हदसम्म सुशान्तको जीवनमा आधारित हुनेछ । उत्तर प्रदेशका सचिनले आफ्नो इन्स्टाग्राममार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् […]
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई कोरोना संक्रमण
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। बिबिसीका अनुसार उनलाई शनिबार राति मुम्बईको नानावती अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। अमिताभ बच्चनले आफूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको जानकारी ट्वीटमार्फत् दिएका छन्। विज्ञापन उनले भनेका छन्, ‘मेरो कोभिड-१९ परीक्षण पोजेटिभ आएको छ। म अस्पताल भर्ना भएको छु। परिवारका बाँकी सदस्यको र कर्मचारीहरूको पनि कोरोना परीक्षण भएको छ। […]
रामचन्द्र काफ्लेले ल्याए “यो तिहारैमा घरैमा नाचिन्छ” बोलको गीत (भिडियोसहित)
विकास निर्माणमा भरतपुर–८ अब्बल बन्दै
२०७७ साल कार्तिक ०६ गते बिहीबारको दैनिक राशिफल
जनताले चौरमा थाल थापेर छाक टार्दा, मैले दशैँ भत्ता लिन सक्दिन: गोकर्ण विष्ट
सांसदमात्रै होइन कर्मचारीहरूले पनि दसैं भत्ता कोरोना कोषमा राख्नुपर्छ : भट्टराई
दुई हप्तामा भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारका तीन ‘स्टिङ अपरेशन’
२०७७ साल कार्तिक ०४ गते मंगलबारको दैनिक राशिफल
अब परीक्षण, उपचार र भर्ना आफ्नै खर्चमा
गाउँ फर्कनेबाट कोरोना बढ्ने खतरा
अब कसैले देशलाई पुनः अस्थिरताको भुमरीमा धकेल्न सक्दैन : ओली